နေးဗစ် LLC ကမ်းလွန်လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီပြန်ကြားရေးနှင့်သိကောင်းစရာများ
A နေးဗစ် LLC ကြီးမားတဲ့ရှိပါတယ် ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှု အကျိုးခံစားခွင့်။ ဒီတော့ရဲ့ဖြောင့်အမှတ်ရနှင့် 10 အဓိကအကြောင်းပြောဆိုကြကုန်အံ့ တစ်နာဗိစ် LLC ၏အားသာချက်များ။ ပထမဦးစွာကျွန်တော်အကျိုးကျေးဇူးများမှာကြည့်ယူပါလိမ့်မယ်။ ယင်းနောက်သငျသညျအသီးအသီးကို item ၏အသေးစိတ်ရှင်းလင်းချက်ကိုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ဖွင့်လှစ်မယ့်ဆွေးနွေးကြမည် ဘဏ်အကောင့် နှင့်ဆွေးနွေးရန် အားသွင်းနိုင်ရန် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု။
တစ်နာဗိစ် LLC ၏ 10 ကောင်းကျိုးများ
Vance Amory, နေးဗစ်၏ပရီးမီးယားလိဂ်နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏ CEO ဖြစ်သူ (လက်ဝဲ) (ညာ)
အဆိုပါနေးဗစ် LLC Multi-အဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးစလုံးအတှကျအပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုပေး တစ်ခုတည်းအဖွဲ့ဝင် ကုမ္ပဏီများသည်။ ဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတရားစွဲမှုကနေအတွင်းပိုင်းက၎င်းတို့ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်မှုဆုံးရှုံးထံမှအဖွဲ့ဝင်များကကာကွယ်ပေးသည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒီအကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး "အမိန့်အားသွင်း" ဟုခေါ်သည်။ (ဒီအရေးအသား၏သကဲ့သို့, 47 ပြည်နယ် 50 အတွက်တစ်ခုတည်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအမေရိကန် LLCs ဘို့ကိစ္စမဟုတ်ပါ။ )
တဦးတည်းနေတဲ့ post ရမယ် အစညျးအနှောငျ နေးဗစ်တရားရုံးတစ်နေးဗစ် LLC နှင့်အတူဆက်နွယ်နေတဲ့တရားစွဲဆိုမှုဖြည့်စွက်မီ။ ဤသည်နှောင်ကြိုးခဲ့သည် $100,000 အဆိုပါ 2015 ပြင်ဆင်ရေးနှင့်မည်သည့်ငွေပမာဏနှင့်အတူတရားရုံး (အပါအဝင်, ဒါပေမယ့် $ 2018 ထက် သာ. ကြီးမြတ်, ကန့်သတ်မပါ) 100,000 အတွက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
တစ်နာဗိစ် LLC မှပိုင်ဆိုင်မှုလွှဲပြောင်းခြင်းဖြစ်ပေါ်ပါဘူး အခွန် ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများအများဆုံးကိုအခြားအမျိုးအစားများနှင့်ဆက်စပ်အကျိုးဆက်များ။ အခွန်အဖွဲ့ဝင်များမှကုမ္ပဏီမှတစ်ဆင့်စီးဆင်းဘယ်မှာ LLC ရဲ့ယေဘုယျအားဖြင့်အခွန်-ကြားနေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးနှစ်နှစ်ရှိပါတယ် ကန့်သတ်၏ပညတ်တော် လိမ်လည်လှည်စီးအနင်းအပေါ်ပိုင်ဆိုင်မှုပြီးနောက်နေးဗစ် LLC ၏အတွင်းပိုင်းချထားပါသည်။ ထို့ကြောင့်ဤအချိန်ပြီးနောက်, တရားရုံးများအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုအားသွင်း၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အမှုကိုနားထောငျဖို့ငြင်းဆန်ပါလိမ့်မယ်။
တစ်ကြွေးရှင်န့်အသတ်များပညတ်တော် beats ရင်တောင် တစ်ဦးကျိုးကြောင်းဆီလျော်သံသယကျော်လွန်အထောက်အထား လိမ်လည်လှည်လွှဲပြောင်းစွပ်စွဲချက်များအတွက်နေးဗစ်အတွက်လိုအပ်ပါသည်။ (ဤဟာအလွန်မြင့်မားတဲ့ဥပဒေရေးရာအတားဖြစ်ပါတယ်။ )
တဦးတည်း LLC သည်မှထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်အဖွဲ့ဝင်အရေအတွက်ကန့်သတ်မရှိ။
စနစ်တကျပုံဖွဲ့စည်းခဲ့သည့်အခါအမေရိကန်ဒေဝါလီခံခြင်းတရားရုံးများယေဘုယျအားဖြင့် (အမေရိကန် LLCs မတူပဲ) နေးဗစ် LLC ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုမထိမခိုက်နိုင်ပါ။
အမေရိကန် LLCs မတူဘဲ, နေးဗစ်တရားရုံးများကုမ္ပဏီအတွက်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးရဲ့အကျိုးစီးပွား foreclosure ခွင့်မပြုပါဘူး။
တစ်ဦး LLC အတွက်တစ်စုံတစ်ဦးရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအကျိုးစီးပွားဆန့်ကျင်နေတဲ့ lien လွှတ်များအတွက်နည်းလမ်းရှိပါတယ်။ ဒါက (ဥပမာအိမ်ထောင်ဖက်ဒါမှမဟုတ်သားသမီး) တစ်စုံတစ်ဦးအတွက် lien အခမဲ့မြီစားရဲ့ LLC အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ရယူနိုငျသညျ, ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်တရားရုံးများအဆက်မပြတ်တရားရုံးများကုမ္ပဏီရှိရာကြောင်းအုပျစိုး ဖွဲ့စည်းခဲ့သည် ထက်ရှိရာ LLC အဖွဲ့ဝင် အသက်ရှင်သော အချင်းချင်းကုမ္ပဏီသဘောတူညီချက်များအနက်ကိုဘော်ပြသင့်ပါတယ်။ ဤသည်လုပ်ငန်းလည်ပတ်သဘောတူညီချက်များနှင့်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အကျိုးစီးပွားလွှဲပြောင်းပါဝင်သည်။
မာကု Brantley, နေးဗစ်၏ပရီးမီးယားလိဂ် (ညာ) နဲ့ကျွန်ုပ်တို့၏ CEO ဖြစ်သူ (လက်ဝဲ)
နေးဗစ် LLC ဥပဒေ
A နေးဗစ် LLC နေးဗစ်၏ကာရစ်ဘီယံကျွန်းအတွင်းပြဋ္ဌာန်းထုံးအဖွဲ့တို့ကိုဖွဲ့စည်းမယ့်ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ နေးဗစ် 1995 အတွက် LLC အထုံးအဖွဲ့တို့ကိုပြဋ္ဌာန်းခြင်းနှင့်နောက်ထပ်က၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှု features တွေတိုးမြှင့်, 2015 အတွက်သူတို့ကိုပြင်ဆင်။ နေးဗစ်၏ကျွန်းစိန့်ကစ်နှင့်နေးဗစ်၏အသင်းချုပ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုတက်စေသည်။ ဒါဟာအရှေ့တောင်ဖလော်ရီဒါနှင့်အကြောင်းကို 1300 မိုင်အရှေ့ Puerto Rico ၏ 300 မိုင်အကြောင်းကိုတည်ရှိသည်။ ဒါဟာအစိုးရကနေးဗစ်စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်း Ordinance ပြဋ္ဌာန်းသည့်အခါ 1984 တစ်ခုပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုဆိပ်အဖြစ်သူ့ဟာသူရာထူးတိုးကတည်းကရှိပါတယ်။
ကမ်းလွန်တစ်ခု LLC ကိုတည်ထောင်အမေရိကန် LLCs ကျော်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုအဖြစ်နောက်ထပ် layer ကိုပေးနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီနာမတော်၌နိုင်ငံခြားအကောင့်ထဲမှာကျင်းပကြသည်။ ဤအပိုင်ဆိုင်မှုကိုအမေရိကန်တရားရုံးများ၏လက်လှမ်းမမီပြင်ပမှာဖြစ်ကြောင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကဖြစ်ပါတယ်။ Plus အားအချို့သောနိုင်ငံခြားတရားစီရင်မှုအမေရိကန်အထုံးအဖွဲ့တို့ကိုနှိုင်းယှဉ်သာလွန်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုဆက်ကပ်ကြောင်း LLC အထုံးအဖွဲ့တို့ရှိသည်။
နေးဗစ်၏ကျွန်းအထူးသဖြင့်, ကျေးဇူးအလျှင်းမပြုဘဲ LLC ပြဋ္ဌာန်း ဥပဒေများ 1995 ၌တည်၏။ တစ်ဦးကအမေရိကန်လူတစ်ဦး, အလှည့်အတွက်တစ်ဦးကိုသုံးနိုင်သည် နေးဗစ် LLC ပေါင်းထားတဲ့ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်သို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကောင့်ပြည်တွင်းတရားစွဲမှုအနေဖြင့်ရန်ပုံငွေများကိုကာကွယ်ရန်လမ်းအဖြစ်။ တနည်းအားဖြင့်တဦးတည်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု run ဖို့ကုမ္ပဏီ၏ကိုသုံးနိုင်သည်။ အဆုံးစွန်သောအကျင့်ကိုကျင့်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမယ့်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်, ပြီးတော့တဦးတည်းလုပ်ကိုင်ရန်ဆန္ဒရှိသော်လည်းရှိရာပြည်နယ်အတွင်းရှိနိုင်ငံခြားအရည်အချင်းများစာတမ်းများဖြည့်စွက်။
အစိုးရအခြို့သောစကားများပါဝင်သောကုမ္ပဏီများအတွက်အထူးခွင့်ပြုချက်ပေးရန်လိုအပ်နေပါသည်။ အာမခံချက်, ဘဏ်, အဆောက်အအုံလူ့အဖွဲ့အစည်း, ကုန်သည်ကြီးများ, Chartered ဘဏ်, သမဝါယမ, ရန်ပုံငွေအဖွဲ့မှာ Imperial, အာမခံ, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု, ချေးငွေထုတ်ပေးရန်, စည်ပင်သာယာတော်ဝင်, ဒါမှမဟုတ်တက္ကသိုလ်: ကုမ္ပဏီ၏နာမ၌ကန့်သတ်စကားလုံးများကိုအောက်ပါတို့ပါဝင်သည်။
ကျေးဇူးအလျှင်းမပြုဘဲ 2015 ပြင်ဆင်ရေး
အဆိုပါနေးဗစ်ဥပဒေပြုလွှတ်တော်နောက်ထပ်တစ်နာဗိစ် LLC ၏ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအကျိုးခံစားခွင့်တိုးမြှင့ရာ 2015 အတွက်တရားတို့ကိုပြင်ဆင်။ ပထမဦးစွာအပေါင်းတို့၏, နေးဗစ်ကိုအမေရိကန်ပြည်နယ်အများစုနဲ့မတူဘဲတစ်ခုတည်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုကိုကုမ္ပဏီများက Multi-အဖွဲ့ဝင်သူတွေကိုကဲ့သို့တူညီသောကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒါကဖြစ်ပါသည်, နေးဗစ်တရားအတွက်မြီစားရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအကျိုးစီးပွားတိုက်ခိုက်ဖို့ရန်ကြွေးရှင်ရဲ့သီးသန့်ဆေးတစ်လက်အဖြစ်အားသွင်းနိုင်ရန် lien တည်စေ နေးဗစ် LLC ဖွဲ့စည်းရေး ပင် LLC သည်တစ်ဦးတည်းသာလူတဦးကပိုင်ဆိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးနေးဗစ် LLC ၏ပိုင်ရှင်ဆန့်ကျင်နေတဲ့တရားသဖြင့်စီရင်နှင့်အတူတစ်ယောက်ယောက်ကိုအတွင်းရှိ LLC မဟုတ်သလိုပိုင်ဆိုင်မှု ယူ. မသွားနိုင်သည်။
အမေရိကန်လူတစ်ဦးသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီအားသွင်းနိုင်ရန်ရှိပါတယ်လျှင်ပိုကောင်းသေးသည်, အားသွင်းနိုင်ရန်ကိုင်ပြီးအဲဒီလူအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏အဘို့ကိုအပေါ်အခွန်ပေးဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါသည်သူတို့ကဖြန့်ဝေသို့မဟုတ်မ (ဗြာ Rul ခံယူခြင်းရှိမရှိကုမ္ပဏီအတွင်းမှရာ၌အမြတ်အစွန်းပါပဲ။ 77- 137) ။ အဆိုပါဖြန့်ဝေလက်ခံရရှိရန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်သူတဦးတယောက်မှအမြတ်အစွန်းအမှန်တကယ်ဖြန့်ဝေသို့မဟုတ်ကြသည်မဟုတ်လော, အခွန်ဥပဒေကြမ်းများအတွက်တာဝန်ရှိတထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။ တဦးတည်းကိုပိုပြီးအချိန်, ဟုတ်တယ်, သင်တရားစွဲသူတဦးတည်းယခုသင်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီထံမှသူတို့ကိုဖြန့်ဝေပါစေခြင်းငှါမဆုံးဖြတ်လျှင်ပင်, သင့်နေးဗစ် LLCs အခွန်ဥပဒေကြမ်းပေးဆောင်ဘို့တာဝန်ရှိပါလိမ့်မယ်။ နေးဗစ်အတွက်အလို့ငှာ liens အားသွင်းသုံးနှစ်လွန်ပြီးမှသက်တမ်းကုန်ဆုံးခြင်းနှင့်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲမရှိကြပေ။
နေးဗစ်ဟိုတယ် Grounds သို့ (ကျွန်ုပ်တို့၏စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ကခေါ်ဆောင်သွားမြေပုံ မှလွဲ. အားလုံးဓာတ်ပုံများကို။ )
operating တစ်နေးဗစ် LLC
တစ်ဦးကမ်းလွန်တစ်ခုတည်းအဖွဲ့ဝင် LLC မှပိုင်ဆိုင်မှုလွှဲပြောင်းတစ်ဦးကအမေရိကန်နိုင်ငံသားပုံမှန်အားဖြင့်ကမ်းလွန်အဖွဲ့အစည်းများ၏အခြားအမျိုးအစားများမှပိုင်ဆိုင်မှုလွှဲပြောင်းချိတ်ဆက်မည်ဖြစ်ကြောင်းအခွန်အကျိုးဆက်များဖြစ်ပေါ်မထားဘူး။ နေးဗစ်နိုင်ငံခြားတရားစီရင်ပိုင်အသိအမှတျမထားဘူး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေးဗစ်ရုံးအတွက်စီမံခန့်ခွဲမှုအမေရိကန်ကြွေးရှင်အစဉ်အဆက်ကိုအမေရိကန်ကနေတရားသဖြင့်စီရင်ပြဋ္ဌာန်းရန်သူတို့ကို enable လုပ်ဖို့နေးဗစ်တရားရုံးမှတစ်ဆင့်တစ်ဦးအားသွင်းနိုင်ရန် lien ရယူထားပြီးဘယ်မှာမျှအမှု၏သိတယ်။
သူကတောင်ပိုကောင်းရရှိသွားတဲ့။ အဆိုပါ 2015 ပြင်ဆင်ရေးသာနှစ်နှစ်မှနေးဗစ်အတွက်ကန့်သတ်များ၏လိမ်လည်လှည်လွှဲပြောင်းပညတ်တော်အတိုင်းလျှော့ချ။ သင်တစ်ဦးနေးဗစ် LLC သို့ပိုင်ဆိုင်မှုလွှဲပြောင်းတစ်ချိန်ကဆိုလိုသည်, နှစ်နှစ်နောက်ပိုင်းတွင်တရားရုံးများတွင်အမှုကိုနားထောငျဖို့ငြင်းဆန်ပါလိမ့်မယ်။ တောင်မှပိုကောင်း, ထိုကြွေးရှင်ယင်းမြီစားအကြွေးဆီးတားသို့မဟုတ်နှောင့်နှေးနေတဲ့နာဗိစ် LLC မှပိုင်ဆိုင်မှုလွှဲပြောင်းတဲ့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သံသယကျော်လွန်သက်သေပြရပါမည်။ သငျသညျရိုးရှင်းစွာနိုင်ငံတကာကမျိုးစုံဖို့နေးဗစ် LLC သို့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုပြောင်းရွှေ့သောတရားရုံးများအသိပေးပင်လယ်အော်မှာအကြွေးကိုစောင့်ရှောက်ရန်လိမ်လည်လွှဲပြောင်းစွပ်စွဲချက်ဆန့်ကျင်အလုံအလောက်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သံသယချပစ်လိမ့်မည်။ ထို့အပြင် 2015 ပြင်ဆင်ရေးဟာကြွေးရှင်တစ်ဦးနေးဗစ် LLC အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဆန့်ကျင်နေတဲ့တရားသဖြင့်စီရင်ပြဋ္ဌာန်းရန်မှတရားဝင်စာရွက်စာတမ်းများဖြည့်စွက်ရှေ့တော်၌ $ 100,000 အမေရိကန်နှောင်ကြိုး post စေသည်။ 2018 ခုနှစ်, နေးဗစ်အစိုးရကခြေလှမ်းထပ်မံ သွား. နှင့်နေးဗစ်တရားရုံးချုပ်ကတော့ $ 100,000 အမေရိကန်ဦးထုပ်ထက်ကိုတောင်ပိုမိုမြင့်မား (သို့မဟုတ်အောက်ပိုင်း) ဟာနှောင်ကြိုးပမာဏကိုသတ်မှတ်ထားဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။
Four Seasons ဟိုတယ်၌နေးဗစ်
အခြားတစ်ဖက်တွင်အမေရိကန်တရားရုံးများတသမတ်တည်းအကြွေးအမေရိကန်ပြည်နယ်တရားရုံးတွင်တရားစွဲဆိုမှုမှတဆင့်တစ်ဦးကိုအမေရိကန်တစ်ခုတည်းအဖွဲ့ဝင် LLC အတွက်မြီစားရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုနှောင့်နှေးနိုင်သည်ကိုကိုင်ထားပါ။ အမေရိကန် LLCs အဖြစ်ကောင်းစွာအားသွင်းနိုင်ရန် lien ကာကွယ်မှုရှိသည်။ သို့သော်အမေရိကန်တရားရုံးတသမတ်တည်းအမေရိကန် LLC အထုံးအဖွဲ့တို့အားဖြင့်ရရှိသည့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကတဆင့်ချိုး။ မဟုတ်နေးဗစ်၌တည်၏။
ဘယ်လိုဒီကိုအမေရိကန်တရားရုံးတွင်ကိုကူညီသလဲ, နေးဗစ် LLC အထုံးအဖွဲ့တို့ကိုမှ 2015 အတွက်လုပ်အပိုဆောင်းပြင်ဆင်ချက်ကိုအမေရိကန်တရားရုံးများတွင်တိုက်ခိုက်မှုမှသည်မြို့သားကျင်းပပိုင်ဆိုင်မှုများကိုခုခံကာကွယ်ရန်အလွန်အကျိုးရှိသောနိုင်ပါတယ်။ ယင်းနေးဗစ် LLC အထုံးအဖွဲ့တို့ကိုရန် 2015 ပြင်ဆင်ရေးကုမ္ပဏီအတွက်သူတို့၏အကျိုးစီးပွားအပေါ်အမိန့် liens အားသွင်းကြသူအဖွဲ့ဝင်များကကာကွယ် verbiage ဝင်စား။ အဲဒီအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးရဲ့အကျိုးစီးပွားကသူတို့အဖွဲ့ဝင်အပေါ် liens ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသူကတခြား LLC အဖွဲ့ဝင်များကရရှိသောနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ရဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ဦးခင်ပွန်း, ဇနီးနှင့်သားသမီးနှစ်ဦးကပိုင်ဆိုင်သည်ဆိုပါစို့ကြကုန်အံ့။ အဘသည်မိမိကိုမိမိဆန့်ကျင်နေတဲ့တရားသဖြင့်စီရင်ရရှိသွားတဲ့နှင့် LLC ၌သူ၏အကျိုးစီးပွားတစ်ဦးအားသွင်းနိုင်ရန်ရရှိသွား။ အဆိုပါဇနီးသို့မဟုတ်ကလေးငယ်များအားသွင်းနိုင်ရန်ထံမှအခမဲ့ LLC သည်၌သူ၏အကျိုးစီးပွားရယူနိုငျပါသညျ။ တနည်းအားဖြင့်သူသည်တရားသဖြင့်စီရင်အကြွေးမှကင်းလွတ်ခွင့်ဖြစ်ကြောင်းပိုင်ဆိုင်မှုအပါအဝင်အခြားပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ LLC အတွက်သူ့ကိုယ်ပိုင်အကျိုးစီးပွားရွေးနှုတ်တော်မူနိုင်ပါတယ်။
Four Seasons ရေကူးကန်
ထို့အပြင်အသစ်အထုံးအဖွဲ့တို့ကိုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးတစ်ဦးအားသွင်းနိုင်ရန်ရှိပါတယ်ရင်တောင်သူနေဆဲနောက်ထပ်မြို့တော်အထောက်အကူပြုနိုင်မပေး။ Plus အား, နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောအဖွဲ့ဝင်များ, ဖြန့်ဝေဖြန့်ဖြူးသောအဘို့ကို၏ဖမ်းဆီးရမိမှုမယ်လို့အဆိုပါတရားစွဲဆိုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးမှဖြန့်ဝေပါစေရန်လိုအပ်ကြောင်းမပါဘဲဒါပြုစေခြင်းငှါစေအခမဲ့ကြောင်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးရှိပါတယ်လျှင်။
အဆိုပါနှစ်ဦးကိုကြိုတင်အခြေအနေများအတွင်း LLC သည်၏ပြုပြင်ခြင်းနှင့်၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်နှင့်အတူလုပ်ဖို့ရှိသည်။ ကိုယ့်အကြောင်းကိုအားလုံးအမေရိကန်တရားစီရင်မှုများတွင်အတွင်း-ကုမ္ပဏီကိစ္စရပ်များနှင့် LLC သည်အင်္ဂါတို့တွင်လုပ်ဖို့ရှိခြင်းကိစ္စရပ်များကိုအဆိုပါ entity အဖွဲ့ဝင်များသို့မဟုတ်ပိုင်ရှင်များနထေိုငျသညျ့နရောကဖွဲ့စည်းနှင့်မခံခဲ့ရရှိရာတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များကစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်နေကြသည်။
Nisbet Plantation သဲသောင်ပြင်ကလပ်
နေးဗစ် LLC အုပ်ချုပ်ရေး
တစ်နာဗိစ် LLC operating တစ်ဦးကအမေရိကန်လူတစ်ဦး၏ရိုးရှင်း, တဦးတည်းအချိန်ပုံစံတင်ပို့ရန်လုပ်ဖို့လိုအပ်နိုင်ပါသည် IRS ကို Form ကို 8832။ ပုံမှန်အားဖြင့်အမေရိကန် Single-အဖွဲ့ဝင် LLCs ဝါး-စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့မဟုတ် "အရေးမစိုက် entity" အခွန်ကုသမှုနှင့် Multi-အဖွဲ့ဝင် LLCs မိတ်ဖက်အဖြစ်အခွန်ကောက်နေကြသည်လက်ခံသွားရမည်အကြောင်း, ကမ်းလွန် LLCs အဆိုပါ 8832 file ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်တစ်ဦးနေးဗစ် LLC အခွန်-ကြားနေစဉ်းစားသည်နှင့်အမေရိကန်လူတစ်ဦးမှအခွန်ကောက်ခံမှုအပေါ်မပါအကျိုးသက်ရောက်သင့်ပါတယ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အခွန်အကွံဉာဏျပေးခြင်းခံရဖို့ပေါ်လာပါဘူး, ကျနော်တို့ကမ်းလွန်အဆောက်အဦများနှင့်အတူကြုံတွေ့သူတကြ် CPA နှင့်အတူတိုင်ပင်အကြံပြုပါသည်။
ယင်းနေးဗစ် LLC ၏နောက်ထပ်ကောင်းတဲ့ feature ကိုအဖွဲ့ဝင်များသို့မဟုတ်မန်နေဂျာနေးဗစ်အတွက်အသက်ရှင်ရန်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုတာပါပဲ။ ဥပမာ, နေးဗစ် LLC ၏မန်နေဂျာတစ်ဦးဖြစ်နိုင်သည်ကိုလည်းသူ့ကိုယ်သူသို့မဟုတ်မိမိကိုယ်ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့တရားသဖြင့်စီရင်နှင့်အတူတစ်ဦးမြီစားဖြစ်နိုင်သည်။ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့မဟုတ်ကမ္ဘာလုံးအပေါ်ကိုအခြားခရိုင်မှာနေထိုင်စေနိုင်သည်။ တစ်စုံတစ်ဦးကတစ်ဦးတရားသဖြင့်စီရင်လျှင်, ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဆိုနိုင်ငံတွင်းရှိပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကိုင်နိုင်သည့်အတွက်နေးဗစ် LLC ကျော်ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုသိသာထင်ရှားသောပမာဏ, ရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါနေးဗစ် LLC ဘယ်နေရာမှာမဆိုအခြားအမေရိကန်, နေးဗစ်သို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုင်ထားနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါနေးဗစ် LLC တခြားနေရာကယ်လီဖိုးနီးယား, နေးဗစ်, ဆွစ်ဇာလန်သို့မဟုတ်တစ်ဦးဘဏ်အကောင့်ရှိနိုင်ပါသည်။
နေးဗစ်မင်္ဂလာဆောင်ဆိုက်ကို Four Seasons ဟိုတယ်၌
နေးဗစ် LLC Manager ကို
ထိုသို့သွားရမည်အကြောင်း ဖြစ်နိုင်သော, မဟုတ်ပါဘူး အကောင်းဆုံး တစ်ခုပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးရှုထောငျ့ကနေတရားသဖြင့်စီရင်မြီစားလည်းသူ့ကိုယ်ပိုင်နေးဗစ် LLC ၏မန်နေဂျာပါ။ ဒါဟာပြင်ပမှာအမေရိကန်၏နထေိုငျသောမန်နေဂျာခန့်အပ်ရန် သာ. ကောင်း၏။ အမေရိကန်တရားရုံးများကမ်းလွန် LLC မန်နေဂျာကိုကျော်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးကတည်းကအမေရိကန်တရားသူကြီးကိုအောင်မြင်စွာပြန်အမေရိကန်ဖို့ရန်ပုံငွေကိုပေးပို့ဖို့နိုင်ငံခြားသူတစ်ဦးအနေနဲ့အမိန့်ပြဋ္ဌာန်းရန်လို့မရပါဘူး။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးစနစ်တကျရေးဆွဲတဲ့ operating သဘောတူညီချက်မဟုတ်ရင်အမေရိကန်တရားသူကြီးအဲဒီလိုလုပ်ဖို့သူ့ကိုအမိန့်နိုင်ကြောင်းနိုင်ငံခြားမန်နေဂျာကိုဖယ်ရှားမယ့်တရားသဖြင့်စီရင်မြီစားခွင့်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ကျွန်ုပ်တို့၏နာဗိစ် Affiliate အဖွဲ့အစည်းကဖောက်သည်များ၏အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားအတွက်ဆောင်ရွက်ရန်တစ်ဦးအာမခံကုမ္ပဏီများကလိုင်စင်နဲ့ကပ်လျက်တည်ရှိနေသည်။ သူတို့ကအမေရိကန်အတွက်ကျန်ကြွင်းသော်လည်းပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ကြွေးရှင်တို့ကသိမ်းဆည်းရမိထားကြောင်းတစ် 100% အခွင့်အလမ်းရှိပါကဒီတော့နှစ်ခုရွေးချယ်မှုစိတ်ထဲထံသို့လာကြ၏။
Option ကိုတဦးတည်းဘာမျှမလုပ်ပေးနှင့်တစ်စုံတစ်ဦးကသင့် hard-ရရှိခဲ့သည်ပိုင်ဆိုင်မှုပျောက်ပါစေရန်ဖြစ်ပါသည်။ option နှစ်ခုယာယီကုမ္ပဏီနှင့်သူ၏လုပ်ရပ်များတစ်ဦးအာမခံကုမ္ပဏီများကကျောထောက်နောက်ခံပြုနေကြသည်တစ်နေးဗစ်လိုင်စင်ရရှိရန်လိုအပ်သောအထူးကြပ်မတ်နောက်ခံစစ်ဆေးမှုများမှတဆင့်သွားပြီသောစိုးစံယူရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါလေးသာမှုထက်ပိုသောသင့်ရဲ့မျက်နှာသာနေသောမြင်ကွင်းခုနှစ်တွင်? ပြည်ပမှာနေထိုင်သူငယ်ချင်းများသို့မဟုတ်မိသားစုဝင်ကိုးစားပြီဘူးသောသူတို့အဘို့အလွန်ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ရှိပါတယ်အခါ "မကောင်းတဲ့အရာသငျသညျကာကှယျပေးနိုငျတဲ့သူကနဦး Co-မန်နေဂျာသို့မဟုတ်ဆက်ခံမန်နေဂျာအဖြစ် step နိုငျသော client ကိုရဲ့ပိုက်ဆံယူဖူးဘူးအကြောင်း, ကာလကြာရှည်ဂေါပကကုမ္ပဏီများမှ "တွေ့ကြုံတတ်၏။
မျောက် Crossing သင်္ကေတပြ, Charlestown
Trust မှ + LLC = ပေးနိုင်သောပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်း
အဆုံးစွန်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအစီအစဉ်နေးဗစ်အတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုယုံကြည်မှုဒါမှမဟုတ်ကွတ်ကျွန်းစုများပိုမိုလူကြိုက်များတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ပါဝငျသညျ။ ဒီအစီအစဉ်မှာကမ်းလွန်ခိုလှုံနေးဗစ် LLC အတွက်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အကျိုးစီးပွားအားလုံးရရှိထားပါသည်။ အဆိုပါ client ကို (နှင့် / သို့မဟုတ်သူသို့မဟုတ်သူမ၏အိမ်ထောင်ဖက်) ကိုယုံကြည်မှု၏အကျိုးခံစားခွင့်နှင့်နေးဗစ် LLC ၏မန်နေဂျာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါနေးဗစ် LLC, အလှည့်အတွက်တဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုဘဏ်စာရင်းရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ client ကိုဘဏ်အကောင့်ပေါ်တွင်လက်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ မကောင်းတဲ့အရာဖြစ်ပျက်သောအခါ, ယုံကြည်မှု၏ဂေါပကဒေသခံတစ်ဦးတရားသူကြီးကရန်ပုံငွေများပြန်လည်ပို့ဆောင်ဖို့သူ့ကိုအမိန့်ပါလျှင်မဖြစ်နိုင်၏အနေအထားအတွက် client ကိုချပြီး, LLC သည်၏မန်နေဂျာအဖြစ် step နိုင်ပါတယ်။ လာသောအခါမန်နေဂျာအပြောင်းအလဲများများ၏အနေအထားပြောင်းရွှေ့ခံရမျှပိုင်ဆိုင်မှုရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိ "လိမ်လည်လွှဲပြောင်း" ရှိပါသည်။ ကုမ္ပဏီအပြောင်းအလဲများအတွက်တစ်ခုသာအနေအထား။
တစ်ဦးဂေါပကရွေးချယ်တဲ့အခါ, အဲဒါကိုသင်ကယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သူတစ်ဦးဦးကြောင်းသေချာစေရန်အရေးကြီးပါသည်။ အဆိုပါဂေါပကနေးဗစ်ဒါမှမဟုတ်ကွတ်ကျွန်းစုများအတွက်လိုင်စင်ရှိပြီး အကယ်. သင်ကအစိုးရသည်၎င်း၏အရာရှိများ, ဒါရိုက်တာများနှင့်ပိုင်ရှင်တွေအပေါ်သိသာထင်ရှားသောနောက်ခံစစ်ဆေးမှုများကို run ထားပြီးစိတ်ချပါငြိမ်ဝပ်စွာနေနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ယုံကြည်မှုကုမ္ပဏီများမှမှန်မှန်စာရင်းစစ်ဆေးနေကြသည်နှင့်၎င်းတို့၏ဒေသဆိုင်ရာအားပြိုင်မှုများကစိစစ်။ ဤအတရားစီရင်မှုအတွက်ဝင်ငွေတစ်ခုသာရှိပြီးငွေပမာဏကမ်းလွန်န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှလာသောကြောင့်, အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာတရားစီရင်မှု၏ဂုဏ်သတင်းကိုထောက်ရန်အလွန်ခဲယဉ်းအလုပ်လုပ်ကြသည်။ စကားမစပ်, သင်ကသူတို့ကိုပေါ်လိမ့်မည်ထက်ကမ်းလွန်စီမံခန့်ခွဲမှုကုမ္ပဏီများသည်သင်တို့အပေါ်မှာပိုပြီးနှံ့နှံ့စပ်စပ်နောက်ခံစစ်ဆေးမှုများကို run ကြောင်းတွေ့ရှပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကသူတို့ရန်ပုံငွေဥပဒေရေးရာရင်းမြစ်များနှင့်အတူ operating ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့တစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတာသေချာစေရန်ချင်တယ်။ သူတို့ရဲ့လိုင်စင်ထိန်းသိမ်းခြင်းကြောင့်ပေါ်မူတည်သည်။
နေးဗစ် Four Seasons Reception
အဘယ်အရာကိုသင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်သင်ကဥပဒေရေးရာအရေးပေါ်ရှိသည်နှင့်သင်ကယ်ဆယ်ရေးမှရောက်လာရန်နေးဗစ် LLC ပံ့ပိုးပေးချင်သည့်အခါ, သူတို့ကတိုက်ရိုက်သင်တို့အဘို့အသင့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစီမံခန့်ခွဲကြဘူးဆိုတာပါပဲ။ ကိုယ့်ကိုအမေရိကန်အတွက်စီမံခန့်ခွဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုအကောင့်လိုပဲသူတို့သည်သင်၏လမ်းညွှန်မှုနှင့်အတူသင်တို့အဘို့သင်တို့ငွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ့်ပိုက်ဆံစီမံခန့်ခွဲမှုကုမ္ပဏီတခုမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပရော်ဖက်ရှင်နယ် assign ။ သင်တစ်ဦးဂေါပကသင့်ရဲ့နာဗိစ် LLC ၏မန်နေဂျာအဖြစ် step ရှိသည်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်သူတို့ကသင့်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုကိုင်တွယ်ဥပမာဆွစ်ဇာလန်ရှိဘဏ်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမန်နေဂျာ employ ။ အဆိုပါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီပုံမှန်အားဖြင့်, သင်ဆက်သွယ်ပါတဲ့အစုစုကိုအဆိုပြု, ပြီးတော့သင့်ရဲ့ input ကိုရှာကြလိမ့်မည်။
အမေရိကန်အကောင့်စီမံခန့်ခွဲတူသောဒါ, သငျသညျမန်နေဂျာသင့်ရဲ့အန္တရာယ်သည်းခံစိတ်ကိုသိပါစေနှင့်အဖွဲ့အစည်းသင်နေးဗစ် LLC အတွင်းအတည်ပြုများအတွက်အဆိုပြုချက်နှင့်အတူတက်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကိုသင်သင်တို့၏သက်သာအဆင့်အထိတွေ့ဆုံရန်စတော့ရှယ်ယာ, ငွေချေးစာချုပ်များ, အဖိုးတန်သတ္တုများနှင့် / သို့မဟုတ်အကျိုးစီးပွား-bearing ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသင့်လျော်သောရောနှောရှေးခယျြနိုငျတယျ။ ဆွစ်ဇာလန်၏အမှု၌, ထိုတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ကနေဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်မကြာခဏနောက်ဆုံးမှာသူကတခြား client များသွားရောက်လည်ပတ်ထိုဒေသတွင်အခါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသင်တို့နှင့်အတူအတွေ့ဆုံရန်အတွက်ပျံသန်းပါလိမ့်မယ်။ သင်သည်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများစစျဆေးနိုငျဒီတော့သင့်ရဲ့အကောင့်အွန်လိုင်း access ကိုရပါလိမ့်မယ်။ သင်သည်ထိုသူတို့တောငျးဆိုလျှင်သင့်နေးဗစ် LLC အကောင့်မှစက္ကူထုတ်ပြန်ချက်များနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတည်ပြုချက်ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
တစ်နာဗိစ် LLC ၏ကောင်းကျိုးများ
မျိုးစုံနေးဗစ် LLC ရှိပါတယ် အားသာချက်များအောက်ပါတို့အပါအဝင်:
single-အဖွဲ့ဝင် LLCs ဥပဒေရေးရာများမှာ
single-အဖွဲ့ဝင် LLCs Multi-အဖွဲ့ဝင် LLCs ကဲ့သို့တူညီသောပစ္စည်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုလက်ခံရရှိ
အဖွဲ့ဝင်များ (ပိုင်ရှင်များ) နှင့်မန်နေဂျာများ (ကုမ္ပဏီ run သောသူတို့အား) အများပြည်သူမှတ်တမ်းများအတွက်တင်သွင်းကြသည်မဟုတ်
LLC သည်၏တစ်ဦးကမန်နေဂျာကုမ္ပဏီ၏ 100% ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်
တစ်ဦးကမန်နေဂျာတစ်ဦးပိုင်ရှင်ဖြစ်ဖို့မလိုအပ်သေးပါကကုမ္ပဏီ၏ 100% ထိန်းချုပ်ဖို့နှင့်၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုနိုင်ပါတယ်။
မည်သည့်နိုင်ငံကနေတစ်ဦးကလူတစ်ဦးသို့မဟုတ်တရားဝင် entity မန်နေဂျာသို့မဟုတ်အဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အခြားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ထဲကနေတစ် LLC နှင့်အတူပေါင်းစည်းနိုင်သလား
တစ်ဦးကအမေရိကန်ကော်ပိုရေးရှင်းသို့မဟုတ် LLC တစ်နေးဗစ် LLC ဖြစ်လာကူးပြောင်းစေခြင်းငှါ
အဆိုပါနေးဗစ် LLC သည်နေးဗစ်လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ Ordinance 1995 အောက်မှာနှင့် 2015 အတွက်ပြင်ဆင်အဖြစ်ဖန်တီးထားသည်။ အဆိုပါအထုံးအဖွဲ့တို့ကိုမူလကဝဲ၏အလွန်ကျေးဇူးအလျှင်းမပြုဘဲအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးအတွင်းကုမ္ပဏီအထုံးအဖွဲ့တို့ကိုအပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါနေးဗစ်လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (ပြင်ဆင်ရေး) Ordinance, 2015 (ထို "Ordinance") ဇူလိုင်လ 1, 2015 အပေါ်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။ နှစ်ခုအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုတည်းဖြတ်မူများကိုရှိခဲ့သည်။ ပထမဦးစွာအမိန့်အားသွင်းနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်အပိုင်းတစ်ဦးပြန်လည်ဖော်ပြရှိ၏။ ဒုတိယအချက်မှာလိမ်လည်လွှဲပြောင်းနှင့် ပတ်သက်. ထည့်သွင်းအသစ်တစ်ခုအပိုင်းရှိ၏။
အဆိုပါအားသွင်းနိုင်ရန်အပိုင်းအဓိကအပြောင်းအလဲအားသွင်းနိုင်ရန် (ကဒေဝါလီခံဂေါပကအပါအဝင်) မည်သည့်တရားသဖြင့်စီရင်ကြွေးရှင်မှမရရှိနိုင်ကြောင်းကိုတစ်ဦးတည်းသောကိုးကွယ်ရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကနေးဗစ် LLC မှသာတစ်ဦးသို့မဟုတ်ရှိပါတယ်မျိုးစုံအဖွဲ့ဝင်များရှိပါတယ်ရှိမရှိဖြစ်ပါသည်, နေးဗစ်တရားရုံးများ LLC သည်သို့မဟုတ်မြို့သားကျင်းပခဲ့သောပိုင်ဆိုင်မှုဖမ်းဆီးရမိခွင့်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ထို့ပြင်အားသွင်းနိုင်ရန်ဒဏ်ငွေ, ပြစ်ဒဏ်များသို့မဟုတ်ပြစ်ဒဏ်ခတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကနေပျေါပေါကျကြောင်းပမာဏထည့်သွင်းရန်ခွင့်ပြုမထားပေ။
တစ်နာဗိစ် LLC ဆန့်ကျင်အားသွင်းနိုင်ရန်ကုမ္ပဏီအတွက်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးရဲ့အကျိုးစီးပွားအပေါ်တစ်ဦး lien ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိပါ။ အဆိုပါအားသွင်းနိုင်ရန်ရှိပါတယ်သူတဦးတည်းအတွက်ခုန်ခြင်းနှင့်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာ, ဒါကြောင့်မူရင်းပိုင်ရှင်ကသူ့ပိုင်ဆိုင်မှုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ သူတို့ကမည်သည့်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏အခွင့်အရေးကိုကငျြ့သုံးနိုငျပါဘူး။ အမိန့်များကိုင်ဆောင်ထားသူမဆိုစီမံခန့်ခွဲမှုဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်လို့မရပါဘူး။ ထို့ပြင်သူတို့ကုမ္ပဏီမဆိုပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဖျက်သိမ်းပြီးသို့မဟုတ်သိမ်းယူလို့မရပါဘူး။ သူတို့ကကုမ္ပဏီရဲ့လှုပ်ရှားမှုများကိုကန့်သတ်လို့မရပါဘူး။ ထို့အပြင်သူတို့ entity ပျော်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
ပုံမှန်အားဖြင့် (10 နှစ်ပေါင်းတစ်ဦးစုစုပေါင်းများအတွက်) တစ်ဦး 10 တစ်နှစ်သက်တမ်းတိုးနှင့်အတူ 20 နှစ်ပေါင်းကြာရှည်ခံမယ့်အမေရိကန်တရားသဖြင့်စီရင်မတူဘဲတစ်နေးဗစ် LLC အားသွင်းနိုင်ရန်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲမဟုတ်ပါကတင်သွင်းပြီးနောက်သုံး (3) နှစ်အကြာတွင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးဖို့ရှိပါတယ်။ ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့်နောက်ထပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများရှာခြင်းနှင့်များသောအားဖြင့်ထိုတရားစွဲဆိုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကိုသွားလိမ့်မယ်လို့အဆိုပါဖြန့်ဝေပေါ်သို့ကိုင်ထားနိုင်ပါတယ်ဆက်လက်နိုင်ပါတယ်။
ပုဒ်မ 43A ခုနှစ်တွင်အသစ်တခုကြေညာချက်သို့လိမ်လည်လွှဲပြောင်းနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည် ကုမ္ပဏီ။ thအပိုင်းစီရင်မြီစားကုမ္ပဏီသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသိမ်းယူရန်ကြိုးစားသူကိုအကြွေးအမှာစကားပြောကြားသည်။ နေးဗစ်နှင့်ကွတ်ကျွန်းစုယုံကြည်မှုပညတ်တရားနောက်ယူခြင်း, ဤအပိုင်းကိုတစ်ကြွေးရှင်လွှဲပြောင်းမှုအတွက်အကြောင်းပြချက်ကြောင့်အထူးသဖြင့်မြီရှင်ဖိနှိပျဖို့ပဲနှင့်အဖွဲ့ဝင်တဦး, အားဖြင့်, ကွှေးမွီမဆပျနိုငျသောဖန်ဆင်းခဲ့ကြောင်းကျိုးကြောင်းဆီလျော်သံသယကျော်လွန်သက်သေပြရန်လိုအပ်ပါသည်ကပြောပါတယ်။ ထို့အပြင်တွက်ချက်မှု LLC သည်အတွက်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးရဲ့အကျိုးစီးပွားတစ်ခုလုံးကိုတရားမျှတတဲ့စျေးကွက်တန်ဖိုးပါဝင်သည်။ လွှဲပြောင်းခဲ့သည့်အခါအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှု၏အဆင်းလှသောဈေးကွက်တန်ဖိုးကြွေးရှင်ရဲ့ပြောဆိုချက်ကို၏ပမာဏထက် သာ. ကြီးမြတ်ခဲ့ကြပါလျှင်ဒါ, တရားရုံးလိမ်လည်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူကြပြီမှလွှဲပြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားကြဘူး။
client ကိုပြောပါတယ်မဟုတ်လျှင်အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, "ဟုတ်တယ်ငါသည်သင်တို့ထံကဝေးမစ္စတာကြွေးရှင်ကသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်နိုင်ရန်အတွက်နေးဗစ် LLC ၌ငါ့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုထား" နှင့်ရန်ပုံငွေများကိုပြောင်းရွှေ့တချို့သည်အခြားတရားဝင်အကြောင်းပြချက်ပေးသည်, ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သံသယပညတ်တော်အတိုင်းကာကွယ်တားဆီးဖို့လုံလောက်သင့်ပါတယ် LLC သည်ဆန့်ကျင်နေတဲ့အားသွင်းနိုင်ရန်။ တစ်ကြွေးရှင် LLC သည်ဆန့်ကျင်နေတဲ့အားသွင်းနိုင်ရန်အားလက်ခံတွေ့ဆုံတောင်မှလျှင်, အထုံးအဖွဲ့တို့ကိုကမဖြစ်နိုင်သလောက်ကုမ္ပဏီပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရရှိရန်စေ။
အဆိုပါရှိရာသို့အလျင်အမြန်တပိုကောင်းတဲ့နေးဗစ် LLC သို့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုထည့်လေ့မရှိ။ အဆိုပါအကြောင်းပြချက်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုဆန့်ကျင်ပြောဆိုချက်ကို file တစ်ခုကြွေးရှင်များအတွက်ကန့်သတ်တစ်ခုနှစ်ခုနှစ်တွင်ပညတ်တော်အတိုင်းလည်းမရှိသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ပို. ပင်နာကျင်အဆိုပါတရားစွဲဆိုမှုဖြည့်စွက်တများအတွက်, တစ်ကြွေးရှင်ပုံစံတင်ပို့ရန်ရှေ့တော်၌ထိုတရားရုံးများနှင့်အတူရှေ့တန်းကိုတက်တဲ့ ($ 100,000 ဥပမာ) ငွေသားနှောင်ကြိုး post ဖို့လိုအပ်ပါသည်။ ဒါကြောင့်နာဗိစ် LLC အထုံးအဖွဲ့တို့ကိုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုမှရတဲ့အနေဖြင့်အကြွေးကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့မျိုးစုံအတားအဆီးများနှင့်အတူ riddled နေကြသည်။